Maguta: Skylines akagadziridzwa neDLC nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Cities: Skylines akagamuchira inonakidza uye inoshamisa yekuvandudza, kushamisika kudiki kune vese vatambi vanobatidzwa pane ino inoshamisa guta simulation uye guta manejimendi zita. Iyo DLC nyowani ine zvemukati nyowani uyezve mamwe matambudziko kana madudu akaitika mushanduro yapfuura akagadziriswa, saka izvo zvinoshandura mukuwedzera kunakidza uye chiitiko chiri nani kune vashandisi veiyi vhidhiyo mutambo.
Kunyanya, iyo DLC inozivikanwa se Maindasitiri DLC uye inouya mushure memamwe maDLC apfuura. Saka Maguta: Skylines inoramba ichivandudzwa kuti igutse vateveri vayo, vasingazofanire kutambura iwo madiki matambudziko akagadziriswa. Mune epamhepo vhidhiyo yemitambo inochengetera seYinozvininipisa Chitoro uye chiutsi kubva kuValve uye unogona kutenga ese ekutanga zita uye akasiyana maDLC anowanikwa, uye kune mamwe mapakeji pamwe nawo ese nemutengo wakanaka.
Semuenzaniso, mune iyo Steam chinongedzo pamusoro iwe une iyo zadza kurongedza, uko parizvino iyi DLC Maindasitiri isina kubatanidzwa, asi ini ndinofungidzira vachazvigadzirisa munguva pfupi uye vozviwedzera kune iyo runyorwa. Nekudaro, unogona kuzvitenga kubva ikozvino zvichienda mberi kubva pane izvi imwe yekubatanidza mweya, kupi kana iwe uine chaicho kutenga kweIndustries DLC. Iwe uchaiwana mushanduro mbiri, imwe yakachipa yeinosvika € 14 uye inodhura imwe ye € 17, iyo yekupedzisira inonzi saPlus.
Neiyi DLC nyowani unogona kumhanyisa yako indasitiri, ne zvivakwa zvitsva zveindasitiri kuvaka ese ari maviri mbishi ekutsvagisa iwo neayo ekugadzirwa kweyekupedzisira chigadzirwa. Maindasitiri ezvekurima, masango, zvicherwa, oiri, nezvimwe. Izvo zvivakwa zvinosanganisira vanotora, nzvimbo dzekuchengetera, kugadzirisa uye zvivakwa zvekubatsira, pamwe nezvimwe zvekuwedzera nemigwagwa. Mafekitori echikafu, matoyi, fenicha, mota, zvemagetsi, ... izvo zvinogadzira zvinhu zvekupa basa uye kugara zvakanaka kuguta rako ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Maguta: Skylines akagadziridzwa neDLC nyowani
Iyo yakachengeteka kwazvo kugoverwa kweGNU / Linux kwe2018
SUSE Linux Enterprise 12 SP4 yekuvandudza vhezheni yaburitswa izvozvi